अध्याय ९२ | सर्वशक्तिमान् परमेश्‍वरको मण्डली
हरेक व्यक्तिले मेरा वचनहरू र कार्यहरूमा मेरो सर्वशक्तिमान्‌ता र मेरो बुद्धिलाई देख्‍न सक्छ। म जहाँ-जहाँ जान्छु, मेरो काम त्यहीँ हुन्छ। मेरा पाइलाहरू चीनमा मात्र छैनन्; अझै महत्त्वपूर्ण कुरा त के हो भने, ती संसारका सबै राष्ट्रमा छन्। तैपनि, सुरुमा यो नाम प्राप्त गर्नेहरू यसभन्दा पहिले उल्‍लेख गरिएका सात राष्ट्रहरू मात्रै हुन्, किनभने मेरो कामको परिणाम यही हो; भविष्यमा चाँडै, तिमीहरूले यसलाई पूर्ण रूपमा बुझेर यसको बारेमा निकै धेरै स्पष्टता प्राप्त गर्नेछौ। यदि मैले अहिले तिमीहरूलाई बताएँ भने, परिणामस्वरूप धेरैजसो लड्नेछन् भन्‍ने मलाई डर छ, किनभने मैले पहिले भनेजस्तै म तिमीहरूको कदअनुसार तिमीहरूसँग बोल्छु र मेरो आवाज निकाल्छु, र मैले गर्ने हरेक कुराभित्र मेरो असीमित बुद्धि हुन्छ, जसलाई कसैले पनि बुझ्‍न सक्दैन; एउटै उपाय भनेको तिमीहरूलाई भाग-भाग गरी बताउनु हो। यो कुरा जान! तिमीहरू मेरो नजरमा सधैँ बालबालिकाहरू हौ; तिमीहरूले लिने हरेक कदममा, तिमीहरूलाई मैले नै अगुवाइ गर्नुपर्छ र निर्देशन दिनुपर्छ। मानिसहरू—मेरो मार्गनिर्देशनको अधीनमा मात्रै तिमीहरूले आफ्‍नो जीवनमा अघि बढ्न सक्छौ; योविना, कोही पनि जिइरहन सक्दैन थियो। सम्पूर्ण ब्रह्माण्डीय संसार मेरो हातमा छ, तैपनि मैले यताउता हलचल गरिरहेको तैँले देख्दैनस्। यसको विपरीत, म शान्त र खुशी छु। मानिसहरूलाई मेरो सर्वशक्तिमान्‌ताको बारेमा थाहा छैन, र तिनीहरू मेरो लागि व्याकुल हुन्छन्—तिमीहरूले आफैलाई कति थोरै चिनेका छौ! तैँले आफ्‍नै सराहना गर्दै, मेरो अघि आफ्‍नो व्यर्थका कुराहरू प्रदर्शन गर्छस्! मैले यसको बारेमा धेरै पहिले नै थाहा पाइसकेको छु। र पनि तँ मेरो अघि चालकी गर्छस्, तँ घृणास्पद दुर्भाग्यपूर्ण मानिस! मेरो घरबाट अहिले नै निस्किहाल्! म तँजस्ता घृणित कुरालाई चाहँदिन। म तँजस्तालाई राख्‍नुभन्दा त मेरो राज्यमा कोही नहोस् भन्‍ने चाहन्छु—तँ घृणित दुर्भाग्यपूर्ण मानिस! के तैँले सामान्य रूपमा नै अझै खाने र वस्‍त्र लगाउने गरिरहेको भए पनि, मैले तँमा काम गर्न छोडिसकेँ भन्‍ने तँलाई थाहा छ? तर के तँ शैतानको लागि जिइरहेको छस्, र तैँले शैतानको लागि सेवा गरिरहेको छस् भन्‍ने तँलाई थाहा थियो? तैपनि तँसँग मेरो अघि खडा हुने साहस छ! तँ साँच्‍चै नै लाजविहीन व्यक्ति होस्!
विगतमा, मैले प्रायजसो यसो भन्‍ने गर्थेँ, “ठूला-ठूला विपत्तिहरू चाँडै आउनेछन्; ठूला-ठूला विपत्तिहरू मेरो हातबाट झरिसकेका छन्।” “ठूला-ठूला विपत्तिहरू” ले केलाई जनाउँछ, र यो “झरिसकेको” कुरालाई कसरी व्याख्या गर्ने? यी ठूला-ठूला विपत्तिहरूले मानिसको आत्मा, प्राण र शरीरलाई घाइते बनाउने किसिमको उम्कनै नसक्‍ने विपत्तिहरूलाई जनाउँछ भन्‍ने तिमीहरूलाई लाग्छ, र मैले उल्‍लेख गरेका “भूकम्प, अनिकाल र महामारी” नै यी ठूला-ठूला विपत्तिहरू हुन् भन्‍ने तिमीहरूलाई लाग्छ। तर तिमीहरूले मेरा वचनहरूलाई गलत रूपले अर्थ लगाएका छौ भन्‍ने तिमीहरूलाई थाहा छैन। र यो “झरिसकेका” ले ठूला-ठूला विपत्तिहरू सुरु भइसकेका छन् भन्‍ने तिमीहरूलाई लाग्छ—यो हाँसउठ्दो कुरा हो! वास्तवमा तिमीहरूले यसलाई यसरी नै बुझ्छौ, र तिमीहरूका व्याख्याहरूलाई सुनिसकेपछि, मलाई साँच्‍चै नै रिस उठेको छ। मानिसहरूले प्रकट गर्न सकेको रहस्य (जुन सबैभन्दा गुप्त रहस्य हो) नै युगौं-युगदेखि सबैभन्दा गम्‍भीर रूपमा अर्थ्याइएको रहस्य हो, र यो त्यस्तो रहस्य हो जसलाई कसैले पनि कहिल्यै व्यक्तिगत रूपमा अनुभव गरेको छैन (किनभने यसलाई आखिरी दिनहरूमा मात्रै प्रकाशमा ल्याइएको छ, र अन्तिम युगमा मात्रै मानिसले यसलाई देख्‍न सक्छ, तैपनि तिनीहरूले यसलाई पहिचान गर्नेछैनन्), किनभने मैले यसलाई सबैभन्दा कसिलो गरी मोहर लगाई राखेको छु, (यसको स-साना भागलाई समेत) कुनै मानिसले हेर्न नसक्‍ने गरी राखेको छु। अब मेरो काम यो चरणमा अघि बढाइसकिएको हुनाले, म तिमीहरूलाई मेरो कामका आवश्यकताहरूअनुसार अन्तर्दृष्टि दिन्छु; अन्यथा, मानिसहरूसँग बुझ्‍ने कुनै उपाय हुनेथिएन। अब म सङ्गति गर्न सुरु गर्छु; सबैले ध्यान दिनुपर्छ, किनभने मेरा ज्येष्ठ पुत्रहरू लगायत जो-जो सावधान हुँदैनन्, तिनीहरूले मेरो न्याय भोग्‍नेछन्, र सबैभन्दा गम्‍भीर मामलाहरूमा तिनीहरूलाई मेरा हातले प्रहार गर्नेछन् (जसको अर्थ, तिनीहरूका आत्मा, प्राण र शरीर लिइनेछ)। मेरो राज्यको हरेक प्रशासनिक आदेशहरूका सम्‍बन्धमा ठूला-ठूला विपत्तिहरूको बारेमा उल्‍लेख गरिएको हो, र मेरो हरेक प्रशासनिक आदेश ठूला-ठूला विपत्तिहरूको भाग हो। (मेरा प्रशासनिक आदेशहरू पूर्ण रूपमा तिमीहरूको निम्ति खुलासा गरिएको छैन, तर तिमीहरू आफै चिन्ता नगर वा यसको बारेमा नआत्तिओ; कतिपय कुराहरू तिमीहरूले अत्यन्तै चाँडै थाहा पायौ भने तिमीहरूलाई त्यति फाइदा गर्नेछैन। यो कुरा याद राख! म बुद्धिमानी परमेश्‍वर हुँ।) त्यसोभए, अर्को भाग के हो? ठूला-ठूला विपत्तिहरूका दुई भाग हुन्छन्: मेरा प्रशासनिक आदेशहरू, र मेरो क्रोध। ठूला-ठूला विपत्तिहरू आउने समय नै म रिसले चूर भई मेरा प्रशासनिक आदेशहरू लागू गर्ने समय पनि हो। यहाँ, म मेरा ज्येष्ठ पुत्रहरूलाई भन्छु: तिमीहरू यसको कारण अपभ्रष्ट बन्‍नु हुँदैन। के सबै कुरा र सबै मामलालाई मैले पूर्वनियुक्ति गरेको छु भन्‍ने तैँले बिर्सिस्? मेरो पुत्र, नडरा! म तँलाई अवश्य नै रक्षा गर्नेछु; तैँले मसँग सदा असल आशिषहरू प्राप्त गर्नेछस्, र मसँग सदासर्वदा एकसाथ रहिरहनेछस्। किनभने तँ मेरो प्रियजन भएको हुनाले, म तँलाई त्याग्‍नेछैन। म कुनै पनि मूर्ख कुराहरू गर्दिनँ, तैपनि यदि मैले कठिनताका साथ पूरा गरेको कुनै कुरालाई तोडेर ढालेँ भने, के मैले आफूलाई खुट्टामा गोली हानिरहेको हुनेथिइनँ र? तैँले आफ्‍नो हृदयमा के विचार गर्छस् सो मलाई थाहा छ। के तैँले यो कुरालाई याद गरिस्? तँ अरू के कुरा मलाई बन्‍न लगाउँछस्? म ठूला-ठूला विपत्तिहरूका बारेमा थप कुरा गर्नेछु। जब ठूला-ठूला विपत्तिहरू आउँछन्, यो सबैभन्दा डरलाग्दो समय हुनेछ, र तिनले मानिसको कुरूपतालाई सबैभन्दा चरम हदसम्‍म प्रकट गर्नेछन्। मेरो अनुहारको ज्योतिमा सबै किसिमका दुष्ट अनुहारहरू प्रकट हुनेछन्, र तिनीहरूको लुक्‍ने ठाउँ, आफूलाई ढाक्‍ने ठाउँ कहीँ हुनेछैन; तिनीहरूलाई पूर्ण रूपमा खुलासा गरिनेछ। ठूला-ठूला विपत्तिहरूको प्रभाव भनेको जो मेरा चुनिएका वा पूर्वनियुक्ति गरिएका होइनन्, तिनीहरूलाई मेरो अघि घुँडा टेक्‍न र रुँदै र दाह्रा किट्दै मलाई क्षमादान माग्‍न लगाउनु हो। मैले शैतानलाई गर्ने न्याय यही हो, मेरो क्रोधपूर्ण न्याय। म अहिले यो कार्यमा संलग्‍न छु, र सायद कतिपय त्यस्ता मानिसहरू छ होलान् जसले योग्यताहरू भएको बहाना गर्न र छल गरेर अघि बढ्न चाहन्छन्; तिनीहरूले जति त्यसो गर्छन्, तिनीहरूको मूल रूप प्रकट नभइञ्‍जेलसम्‍म शैतानले तिनीहरूमा त्यति नै काम गर्नेछ।
मलाई मेरो काम गर्न हतार छैन, र म आफै हरेक व्यक्तिलाई योजनाबद्ध रूपमा चलाउँछु (तिनीहरू ठूलो रातो अजिङ्गरका सन्तान हुन् भन्‍ने तथ्यलाई ध्यानमा राख्दा, यो तिनीहरूको गिल्‍ला हो, र म तिनीहरूलाई कुनै ध्यान दिँदिन, त्यसकारण “योजनाबद्ध” भन्‍ने शब्दको प्रयोग गर्नु अत्योक्ति हुँदैन), र हरेक काम म आफै गर्छु। सबै कुरा मसँगै सफल हुन्छ, र यो सुरक्षित र स्थिर सफलता हो; मैले गर्ने सबै कुराको बन्दोबस्त पहिले नै चरणबद्ध रूपमा गरिएको हुन्छ। म तिमीहरूलाई मेरो इच्‍छा र मेरो बोझको बारेमा अलि-अलि गर्दै बताउनेछु। अबदेखि उसो, मेरा वचनहरू सबै राष्ट्रहरू र सबै मानिसहरूकहाँ देखा पर्न थाल्‍नेछ। मेरा ज्येष्ठ पुत्रहरूलाई पहिले नै पूर्ण तुल्याइसकिएको हुनाले (मेरा वचनहरू मेरा पुत्रहरू र मेरा मानिसहरूमा केन्द्रित छन्), मैले काम गर्ने तरिका फेरि पनि परिवर्तन हुन थालेको छ। के तिमीहरू यसलाई स्पष्ट रूपमा देख्‍न सक्छौ? के तिमीहरूले यी विगत केही दिनहरूमा मेरा वचनहरूको शैलीलाई अनुभव गरेका छौ? म मेरा ज्येष्ठ पुत्रहरूलाई मार्गको हरेक कदममा सान्त्वना दिन्छु, तर अबदेखि (मेरा ज्येष्ठ पुत्रहरू पहिले नै पूर्ण भइसकेका हुनाले), म मेरो हातमा चक्कु बोक्छु (“चक्कु” को अर्थ “सबैभन्दा तीक्ष्ण वचनहरू” हुन्छ)। ज-जसले मलाई एक क्षणको लागि समेत नकरात्मक रूपमा लिन्छ (यसले पूर्वनियुक्ति वा छनौट नभएकाहरूलाई जनाउँछ, र त्यसकारण यसमा कुनै विरोधाभास छैन), तिनीहरूले मलाई सेवा गरे पनि वा तिनीहरू अरू जेसुकै भए पनि मलाई त्यसको मतलब हुँदैन; म तिनीहरूलाई तुरुन्तै लखेट्नेछु। म सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्‍वर हुँ, र म सबै मानिसहरूलाई मेरो सेवा गर्न लगाउन सक्छु। म त्यस्ता मानिसहरूबाट अलग हुन अनिच्छुक छैन; यदि म तिनीहरूलाई चाहन्‍नँ भनी भन्छु भने, म तिनीहरूलाई चाहन्‍नँ। अब यो समय आइसकेको हुनाले, मलाई बेखुशी तुल्याउने कसैलाई देख्‍ने बित्तिकै कुनै अनुसन्धान नगरिकन म तिनीहरूलाई तुरुन्तै हटाउनेछु, किनभने म उहाँका वचनहरू जत्तिकै असल परमेश्‍वर हुँ। मैले मेरो सेवाको लागि पूर्वनियुक्ति गरेकाहरूको हकमा भन्दा—तँ जति नै असल भए पनि, तैँले मेरो अवज्ञा गर्ने कुनै कुरा गरेको भए पनि नभए पनि, यदि तैँले मलाई बेखुशी तुल्याइस् भने, म तँलाई निकालिदिनेछु। मलाई कुनै पनि भविष्यको समस्याको डर छैन। मसँग मेरा प्रशासनिक आदेशहरू छन्, म मेरा वचनहरू जत्तिकै असल छु, र मेरो वचन पूरा हुनेछ। के म शैतानलाई रहन दिनेछु? मेरो कुरा सुन, मानिसहरू! तिमीहरू डराउनु पर्दैन; मैले तँलाई जहिले निस्केर जा भन्छु तँ निस्केर जानुपर्छ। मलाई बहानाहरू नदेखा; मसँग तँलाई भन्‍ने कुनै शब्‍द छैन! किनभने मैले त्यस्तो धैर्यताको अभ्यास गरेको छु, र मेरा प्रशासनिक आदेशहरू लागू गर्ने समय आइपुगेको छ, र तिमीहरूको आखिरी दिन पनि आइपुगिसकेको छ। हजारौं वर्षसम्‍म, तिमीहरू पथभ्रष्ट थियौ र सधैँ हठी भई, मनोमानी रूपमा कामकुरा गर्‍यौ, तर म सधैँ सहनशील रहेँ (किनभने म उदार छु र तेरो भ्रष्टतालाई केही हदसम्‍म अनुमति दिन्छु)। तर अब त, मेरो सहनशीलताको समय सकिएको छ, र तिमीहरूलाई लिएर आगो र गन्धकको कुण्डमा फ्याँक्‍ने समय आएको छ। छिटो गरेर बाटो छोड। म मेरो न्यायलाई औपचारिक रूपमा लागू गर्न सुरु गर्छु, र म मेरो क्रोध पोखाउन सुरु गर्छु।
संसारका सबै राष्ट्र र ठाउँमा बारम्‍बार भूकम्‍प, अनिकाल, महामारी, र सबै किसिमका विपत्तिहरू भइरहन्छन्। मैले सबै राष्ट्र र सबै ठाउँमा मेरो काम गर्ने क्रममा, यी विपत्तिहरू संसारको सृष्टिको समयदेखिको कुनै पनि समयमा भएको भन्दा अझै बढी गम्‍भीरताको साथ देखा पर्नेछन्। यो सबै मानिसहरूलाई मैले गर्ने न्यायको सुरुवात हो, तर मेरा पुत्रहरू सहजताको साथ विश्राम गर्न सक्छन्; तिमीहरूमाथि कुनै विपत्ति आइपर्नेछैन, र म तिमीहरूलाई सुरक्षित राख्‍नेछु। (यसको अर्थ तिमीहरू उप्रान्त देहमा होइन, तर शरीरमा जिउनेछौ, यसरी तिमीहरूले कुनै पनि विपत्तिको पीडा भोग्‍नेछैनौ।) मसँगै मिलेर, तिमीहरूले राजाहरूका रूपमा शासन गर्नेछौ र ब्रह्माण्डमा र पृथ्वीको पल्‍लो छेउसम्‍म मसँग सदासर्वदा असल आशिषहरूमा रमाउँदै सबै राष्ट्रहरू र सबै मानिसहरूलाई न्याय गर्नेछौ। यी वचनहरू पूरा हुनेछन्, र तिनलाई चाँडै नै तिमीहरूको आँखा अघि हासिल गरिनेछन्। म एक घण्टा पनि ढिलाई गर्दिन न त एक दिन नै; म कामकुराहरू अविश्‍वसनीय ढङ्गले तुरुन्तै गर्छु। चिन्ता गर्ने वा व्याकुल हुने नगर्; मैले तँलाई दिने आशिष तँबाट कसैले लिन नसक्‍ने कुरा हो—यो मेरो प्रशासनिक आदेश हो। मेरा कार्यहरूको कारण सबै मानिसहरू मप्रति आज्ञाकारी हुनेछन्; तिनीहरू नरोकीकन हर्षोल्‍लास गर्नेछन्, र त्योभन्दा पनि बढी अन्त्यहीन रूपमा आनन्दले उफ्रनेछन्।
अघिल्लो: अध्याय ९१
अर्को: अध्याय ९३